Semalt Expert: Ahoana ny fomba famolavolana ny Business Digital anao
Araka ny fikarohana nataon'ny MIT Sloan Management Review sy ny Deloitte UniversityNy gazety, maro ireo orinasa no vonona ny handeha an-tserasera. Anatin'ity fandalinana ity, eo amin'ny 44% amin'ireo olona voavaly (mpandalina 3700, mpitantana ary mpitantana)dia nanazava fa ny orinasan'izy ireo dia vonona hanakorontana ny fampihorohoroana taorian'ny fampidirana ny fomba niomerika vaovao. Na izany aza, 56% nyTsy nahatsapa ho vonona ny tetezamita nomerika ireo mpanohitra ary manohitra ireo fomba vaovao.
Ny fandrafetana sehatra dizitaly dia midika zavatra betsaka amin'ny raharahambarotra. Ohatra, ny Fikarohana sasanyNy fomba fanamafisana ny Engine Optimization (SEO) dia mampitombo ny fototra ijoroan'ny mpanjifa - tavolo per bambini asilo nido. Ny fampitomboana ny raharaham-barotra dia mety ho zavatra tsara ho an'ny drafitra maharitra.Na tsy hitranga amin'ny raharaham-barotra ity tranga ity dia mila design ianao na karazana sary iray momba ny vokatra lava. Olana marodia azo inoana fa hitsangana, izay mahazatra rehefa manova ny fandaminana. Noho izany, manaova paikady mazava amin'ny fikarakarana izanyNy tetikasa dia mety ho asa fanampiny, izay mendrika ny ezaka.
Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia manazava ny lafiny amin'ny famolavolana tolotra nomerika mahomby.
Ny fisaintsainan-kevitra dia mamporisika ny fiaraha-miasa sy ny fandrosoana
Rehefa manao modely fanovàna, ny dingana dia mitaky vahaolana amin'ny fampiasana voatokanany fanalahidy izay tian'ny mpanjifa. Tsy mazava ny valiny, ka azo atao amin'ny fampiasana fitsipika sasantsasany ny fanaovana tetikasafiaraha-miasa eo amin'ireo antoko izay voakasika amin'ny fanovana. Ohatra, rehefa manao dokambarotra nomerika, dia mety hisy orinasaMila mikarama manam-pahaizana SEO ianao ary mampianatra ny ekipany amin'ny teknolojia mahaleotena vitsivitsy mba haka ireo mpanjifany..Ao anatin'ny vanim-potoana maoderina,ny ankamaroan'ny mpanjifa dia avy amin'ny aterineto. Ity trangan-javatra ity dia midika fa ny tranonkala dia manova tsikelikely ny fivarotana ara-batana.
Ny fomba fisainana
Ny fomba fisainana dia mandidy ny fampidirana ny lafiny rehetra amin'ny fikambanana iray hiara-miasato make a solution for something. Tafiditra ao anatin'izany ny fisainana samihafa mba hijerena ny olana manokana momba ny vahaolana amin'ny hoavy. Amin'ny irayRaha ny hevitr'ireo fomba fijery samihafa dia manapaka ny fizotran'ny raharaham-barotra ny fomba fiasa mahomby amin'ny asa ho avy. Ohatra, nympiara-miasa amin'ny MU / DAI sy SalesForce amin'ny ady atao amin'ny piramida an-dranomasina.
Amin'io lafiny io, ny fiantsoana ekipa teknolojia dia mety hahomby. Hevitra marony famolavolana ary ny fampifanarahana amin'ny sehatra dizitaly dia mila manam-pahaizana sasantsasany sy manam-pahalalana mba hiatrehana olana. Ohatra,Ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa mpanamboatra sy ny SEO dia mety hitarika amin'ny famolavolana tranonkala tsara, izay tsy ampy fotsiny, fadia afaka manolo ny fivarotana ara-batana. Ao anatin'ity fametrahana ity, ilaina ny fisainana noforonina satria mety hiova ny fifindranampiasa, entana ary lafiny maro hafa.
Ny drafitra fanorona dia hevi-dehibe rehetra, izay afaka manampy ny ankamaroan'ny fikambanana handaminany ho aviny. Izany dia ahafahan'ny olona samihafa mitondra fomba fijery samihafa sy vahaolana. Ny fomba fisainana manintona dia afaka mihatra amin'ny marony orinasa, ary mety ho hafa mihitsy ny olona samihafa. Ny fomba fisainana manoritra dia manampy ny raharaham-barotra hamahana ny fotoana maharitrany olana ary ny fifindrana avy amin'ny olana sasantsasany. Sarotra ny miova olona, ​​nefa mety ho sarobidy amin'ny sasanytranga. Ny fomba fisainana manokona dia manampy ny olona hahazo fanavaozana maro isan-karazany ary koa ny fiaraha-miasa bebe kokoa.Amin'ny alalan'ireo torohevitra ato amin'ity lahatsoratra ity, dia azo atao ny manangana fomba fisainana mety tsara. Mety ho miavaka amin'ny fifindrana mankany amin'nyteknolojia dizitaly.